Pyridines-APICMO CDMO Vaiti
Pyridine inonzi Density 0.978 g / cm3. Flash point 68 ° F. Vapors vane nzara kupfuura air. Dhiyabhorosi kuburikidza nekudya uye kuputika. Kupisa kunounza oksijeni inotyisa ye nitrogen.
Pyridine inenge yakajeka mvura nekunhuhwirira kwakasviba, kuisa, uye hove-yakafanana. Inogona kugadzirwa kubva kumarara asina kuchena emarara kana kubva kune mamwe makemikari. Pyridine inoshandiswa kuparadza zvimwe zvinhu. Inoshandiswawo kuita zvinhu zvakasiyana-siyana zvakadai semishonga, mavhithamini, zvokudya zvinonaka, mapepa, madhayi, mishonga yemabhegi, mashizha, insecticides, uye herbicides. Pyridine inogonawo kuumbwa kubva pakaputsika kwezvinhu zvakawanda zvepanyama mumhepo.
Kuratidza zvose 10 zvawanikwa